Fifandirana ara-nofo mandefitra | ICD-11 | World Health Organization
Home News Blog Ny 'fitondran-tena mamoafady' voasokajy ho aretin-tsaina ara-tsaina nataon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana
adminaccount888 July 9 Vaovao farany
Ireto ambany ireto ny fanamarihana sasany ho an'ny mpanao gazety sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny momba ny sokajy vaovao momba ny famandrihana. Ity misy famintinana fohy ao amin'ny blog.
Tamin'ny 18 Jona 2018, ny mpanoratra ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana manasokajy ny International Classification of Diseases, 11th Fanitsiana, mamoaka fanambarana an-gazety izay manambara fa ny kinova fampiharana ny ICD-11 ho avy izao dia azo jerena amin'ny Internet. Anisan'izany ny aretina miteraka firaisana ara-nofo maharikoriko (CSBD) voalohany. Na eo aza ny tsaho vitsivitsy mamitaka mifanohitra amin'izany, tsy marina izany fa nolavin'ny OMS ny "fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia" na "fiankinan-doha amin'ny firaisana".
Ny fihetsika mamoa fady dia nantsoin'ny anarana isan-karazany nandritra ny taona maro: "firaisana ara-nofo", "fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia", "fiankinan-doha amin'ny firaisana", "fitondran-tena tsy voafehy intsony" sns. Ao amin'ny katalaoginy farany momba ny aretina, ny WHO dia nanao dingana iray ho ara-dalàna ny fikorontanana tamin'ny fanekena ny aretina tsy azo atao "firaisana ara-nofo maharikoriko" (CSBD) ho aretin-tsaina. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana momba ny OMS Geoffrey Reed, ny aretin-tsokajy CSBD vaovao dia “mampahafantatra ny olona fa manana“ tena aretina ”izy ireo ary afaka mitady fitsaboana.”
Ny famoahana ny gazety dia azo jerena ao amin'ny tranonkala WHO Eto. Ho an'ny vitan-dry zareo, dia averinay averina eto ambany izy io.
Ny famoaham-baovaon'ny ICD-11 dia manonona ny fampidirana ny gaming ho fahasamihafana ara-pahasalamana ara-tsaina, ary ny fomba fanangonana ny tsy fitovian'ny lahy sy vavy amin'izao fotoana izao.
Izany dia tsy miresaka Diagnostika vaovao hafa: "Diso fitondran-tena"Izay miseho ao amin'ny disadisa fanaraha-maso" Impulse ".
The "Famandrihana fanamarihana"Ao ambanin'ny diagnostika tsirairay dia misy an'ity fanambarana ity: "Miorina ny rafitra code an'ny ICD-11 MMS."
Ity ny lahatsoratra farany amin'ny "Diagnostic malemy fitondran-tena":
Diso fanavakavahana ara-nofo [6C72], tamin'ny farany dia nanolotra tambajotra ara-pahasalamana ho an'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny tsy fahafahana mifehy ny fitondran-tena raha misy vokany ratsy. Ny fanatanterahana ny fehezan-dalàna vaovao dia samy hafa mihitsy, saingy ny tena zava-dehibe dia ny fiheveran'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana eto amin'izao tontolo izao fa ny fitondran-tena mahamenatra dia mandoa ny aretina. Fanaovan-tsoa hafahafa izany izay azo ampiasaina ho an'izay mahafeno ny fepetra. "Fitondran-tena mahomby" koa dia "lazaina hoe fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo na aretim-pangorahana" araka ny manam-pahaizana manam-pahaizana Jon E. Grant, JD, MD, MPH Current Psychiatry (Febroary 2018: p.3). Ny famantarana CSBD vaovao dia mety ampiasaina ihany koa mba hamantarana ireo soritr'aretina mahery vaika amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet.
Mihoatra ny 80% amin'ny olona manana fitondran-tena mampihetsi-po no mitatitra ny fampiasana sary mamoafady na mampihoron-koditra.
"Ny fampiasana sary vetaveta manahirana dia mety haneho fisehoan-javatra mampiavaka ny firaisana ara-nofo (antsoina koa hoe faneriterena ara-nofo, fiankinan-doha amin'ny filan'ny nofo na fitondran-tena tafahoatra ao amin'ny boky - Kafka, 2010; Karila et al., 2014; Wéry & Billieux, 2017) satria amin'ny fanadihadiana maro maherin'ny 80% ny olona manana firaisana ara-nofo no nitatitra ny fampiasana sary vetaveta be loatra / olana (Kafka, 2010; Reid et al., 2012) ". (Bőthe et al. 2018: 2)
Diagnostic manuals tahaka ny WHO Fandaharana iraisam-pirenena momba ny aretina (ICD-11) sy ny Association American Psychiatry Fandinihana Diagnostika sy Statistique momba ny fahasalamana ara-tsaina (DSM-5) aza marika ny toe-pahasalaman'ny saina ho "Fiankinan-doha" isaky ny iray. Aleon'izy ireo mampiasa ny teny hoe "Disorder."
Ny "fitondran-tena mampihetsi-po" dia vokatry ny tsy fahombiazan'ny fanaraha-maso ny firaisana ara-nofo, fanentanana ara-piraisana ara-nofo na fanentanana, ka miteraka fihenan'ny firaisana ara-nofo mandritra ny fotoana maharitra (ohatra: 6 volana na mihoatra).
Mampihoron-koditra ny aretina mampiady
Ny mpitsikera voalohany dia niahiahy fa misy diagnostika ofisialy hampiasaina hanandramana patetika ny vitsy an'isa sy ny fomba fanao ara-nofo hafa. Na izany aza, mba hahatratrarana ny mason-tsivana momba ny diagnostika ho an'ny CSBD, ny fihetsika manahirana dia tsy maintsy miteraka fahaketrahana maharitra na fahasimbana lehibe eo amin'ny sehatra manokana, fianakaviana, ara-tsosialy, fanabeazana, asa, na sehatra manan-danja hafa iasan'ny. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny diagnostika vaovao dia tsy mamantatra ireo marary mifototra amin'ny inona Ny fitondran-tena ara-pananahan'izy ireo dia manao fanatanjahan-tena. Ny marary dia miankina amin'ny faharetan'ny fahantrana sy ny fahantrana. Raha tsy miteraka ny fitondran-tena ara-nofo, na inona na inona mitranga, dia tsy hampiharina ilay aretina vaovao.
Ny mpitsikera hafa dia nampitandrina fa mety hiteraka aretina diso ny marary CSBD noho ny marary tsy dia mampihetsi-po, raha ny marina, ary ny fahasahiranana dia vokatry ny fitsaràna ara-moraly amin'ny marary na ny matihanina. Mba hisorohana ny vokatra azo, ny fizarana vaovao dia manome, "Ny fahantrana izay mifandray tanteraka amin'ny fitsaràna ara-moraly sy ny tsy fankasitrahana ny fananahana ara-pananahana, ny fanentanana, na ny fitondrantena dia tsy ampy." Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny marary iray dia tsy maintsy mahavita mifehy ny fitaoman-dratsy ny fanaovana firaisana ara-nofo miverimberina izay lasa olana.
Adihevitra momba ny Diagnostika
Nisy adihevitra be teo amin'ny fitarihana ny famoahana ny fananganana vaovao ao amin'ny ICD-11. Ny fihoaram-pihetseham-po manimba ny firaisana ara-nofo (voalaza amin'ny fampiharana fa aretina mitera-pahavoazana) dia noheverina ho fampidirana ao amin'ny DSM-5, saingy farany dia nesorina. Araka ny voalazan'ireo mpitarika neuroscientista, "Tsy nanakana ny fisorohana, ny fikarohana ary ny ezaka fitsaboana ity fanilihana ity, ary ireo mpitsabo havia tsy misy fambara ara-dalàna ho an'ny korontana ara-pananahana."Potenza et al. 2017)
Amin'izao fotoana izao, ny sokajin'ny raiamandrenin'ny Diagnostika vaovao CSBD dia ny aretim-pivalanana tampoka, izay ahitana ny fanandramana tahaka ny Pyromania [6C70], Kleptomania [6C71] ary ny Aretina Enti-mampidi-doza [6C73]. Kanefa ny fisalasalana dia mitoetra hatrany amin'ny sokajy idealy. Araka ny filazan'i Yale, manam-pahaizana momba ny neuroscience, Marc Potenza MD PhD sy Mateusz Gola PhD, dia nanipika ny mpikaroka ao amin'ny Academy Academy of Sciences sy ny University of California San Diego hoe: "Ny tolo-kevitra amin'izao fotoana izao amin'ny fametrahana ny korontana CSB amin'ny fikorontanan'ny fifehezana kevitra ... Misy ny data milaza fa ny CSB dia mizara tarehimarika maro amin'ny fiankinan-doha. "(Kraus et al 2018)
Mety tsara ny manamarika fa ny ICD-11 dia misy diagnostika momba ny korontana filokana eo ambanin'ny aretina roa noho ny fihetsika mampiankin-doha sy eo ambany korontana amin'ny fanaraha-maso. Noho izany, ny fanasokajiana ireo aretina dia tsy voatery hifanelanelana (Bőthe et al. 2018: 2). Ny fanasokajiana dia mety hiova arakaraka ny fotoana. Ny filokana filokana dia nosokajiana ho toy ny aretin-tsaina ao amin'ny DSM-IV sy ny ICD-10, saingy miorina amin'ny fandrosoana amin'ny fahatakarana ara-pihetseham-po, ny Diso filokana dia naverina ho "aretina mifandraika amin'ny aretina sy fiankinan-doha" (DSM-5) ary "Diso noho ny fihetsika mampiankin-doha" (ICD-11). Mety hitranga ity diagnostika CSBD vaovao ity mety hanaraka lalam-pampandrosoana mitovy amin'ny Gambling Disorder.
Na inona na inona fomba fitrandrahana an-tserasera amin'izao fotoana izao, ny fampidirana ny CSBD ao amin'ny ICD-11 amin'izao fotoana izao dia manome fankasitrahana sy ilaina fa misy olona mila fampidiran-draharaha mandaitra mahomby mba hanampiana azy ireo hifanaraka tsara amin'ny fitondran-tenany sy ny vokany. Hanamora ihany koa ny fikarohana fikarohana mila ilaina amin'ny fitondran-tena mahomby.
"Mety hifandraika amin'ny fandinihana ny fomba fiasan'ny DSM sy ny International Classification of Diseases (ICD) mikasika ny fizotran'ny famaritana sy ny fanasokajiana. Amin'izany dia heverinay fa misy ifandraisany amin'ny korontana filokana (fantatra ihany koa amin'ny filokana) ary ny fomba nandinihana azy tao amin'ny DSM-IV sy DSM-5 (ary koa ny ICD-10 sy ny ICD-11 ho avy). Ao amin'ny DSM-IV, ny filokana patolojika dia sokajiana ho “Disorder Control-Impulse tsy any an-kafa voasokajy.” Ao amin'ny DSM-5, dia navadika ho "aretina mifandraika amin'ny zava-mahadomelina sy fiankinan-doha."…. "Fomba mitovy amin'izany no tokony hampiharina amin'ny CSB, izay raisina ho fampidirina ho aretina tsy voafehy ao amin'ny ICD-11 (Grant et al., 2014; Kraus et al., 2018) ". Ireto teny nalaina ireto dia nalaina avy Gola sy Potenza 2018.
Taorian 'ny World Health Organization (WHO) mitazona ny aretin'ny gasy sy ny CSBD ho fepetra ara-pahasalamana ara-tsaina, a tatitra ao amin'ny mpiambina gazety dia nilaza fa ny hopitaly London dia manomana ny hanomboka ny foiben'ny fiankinan-doha amin'ny Internet ho an'ny tanora sy olon-dehibe. Ny mpitsabo amin'ny firaisana ara-nofo any an-toeran-kafa dia nahita ny fitomboan'ny tanora mpanjifa izay mampiasa fampihetseham-batana sy tranonkala fifampiresahana amin'ny Internet, ary mijaly noho ny olana ara-pahasalamana vokatr'izany.
Araka ny voalazan'i Mateusz Gola PhD, mpikaroka ao amin'ny Academy Academy of Sciences sy ao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia San Diego, dia manana tombony hafa koa ny diagnostika vaovao CSBD. "Mamaritra mazava ny fepetra diabeta. Ankoatra izany, ny psikology momba ny klioba sy ny mpitsabo saina dia hianatra ny aretina. Raha tsy misy ny CSBD, dia maro ny mpitsabo tsy mahalala momba ny olana ara-piraisana ara-nofo. Farany, io aretina io dia mety hanome marary maromaro kokoa ho an'ny fitsaboana amin'ny fiantohana ny fiantohana. "Nanampy izany i Gola," ny fitsaboana vaovao, "dia tsy mamaha ny olana amin'ny fomba fihetsika mahomby amin'ny CSBD, fa mamela fanadihadiana bebe kokoa, mety mitarika fomba fiasa azo itokisana. "
Fitomboan'ny fahalalahana ho an'ny marary
Shane W. Kraus, Ph.D. Profesora mpanampy amin'ny fitsaboana aretin-tsaina ary talen'ny klioban'ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena ao amin'ny Hopitaly Veterans Fahatsiarovana an'i Edith Nourse Rogers, University of Massachusetts Medical School momba ny sokajy diagnostika vaovao: "Ity dia dingana voalohany tsara. Ny fampidirana ny CSBD ao amin'ny ICD-11 dia mety hampitombo ny fidirana amin'ny fikarakarana ny marary (iraisam-pirenena sy any Etazonia). Ankoatr'izay, ny fampidirana dia hampitombo ny famatsiam-bola fikarohana izay nifantoka tamin'ny tantara tamin'ny aretina ara-pahasalamana ara-tsaina. Ho fanampin'izay, heveriko fa hampihena ny stigma ho an'ireo olona voakasik'izany ary hampitombo ny fahalalàn'ny mpikarakara momba izany. ”
Fiofanana momba ny fahasalamana
Ny tanjona tondroin'ny famoahana ICDUMX vao haingana dia ny hamela ireo firenena hampiofana ireo matihanina momba ny fahasalamana eo amin'ny diagnose ny boky. Ny mpikaroka dia namporisika koa fa ny mpitsabo sy ny mpanolotsaina dia ho voaofana sy hahatakatra kokoa ny fitondran-tena mampihetsi-po:
“Zava-dehibe ihany koa ny fahafantaran'ny mpikarakara fikarakarana (izany hoe ireo mpitsabo sy mpanolotsaina) izay olona mety hangataka fanampiana amin'ny CSB. Nandritra ny fanadihadianay izay nahitana lohahevitra 3,000 mahery mitady fitsaboana ho an'ny CSB, matetika no henontsika fa ny olona mijaly amin'ny CSB dia tojo sakana maro mandritra ny fitadiavany fanampiana na amin'ny fifandraisany amin'ireo mpitsabo (Dhuffar & Griffiths, 2016). Matetika ny dokotera no milaza fa mety hisoroka ny lohahevitra ny dokotera, milaza fa tsy misy ny olana toy izany, na manoro hevitra fa ny iray dia manana firaisana ara-nofo ambony, ary tokony hanaiky izany fa tsy ny fitsaboana (na dia ho an'ireo olona ireo aza, ny CSB dia mety hahatsapa ny endriny sy ny tarika amin'ny voka-dratsy maro). Mino izahay fa ny fepetra voafaritra tsara ho an'ny korontana CSB dia hampiroborobo ny ezaka fanabeazana, anisan'izany ny fandrosoana programa fanofanana momba ny fomba fanombanana sy fitsaboana ireo olona manana soritr'aretin'ny CSB. Manantena izahay fa ny fandaharam-pianarana toy izany dia ho lasa fampiofanana ara-pahasalamana ho an'ny psikology, psychiatrists, ary ireo mpikarakara hafa momba ny fitsaboana ara-pahasalamana ara-tsaina, ary koa ireo mpikarakara fikarakarana hafa izay isan'izany ny mpitsabo mpanampy voalohany, toy ny dokotera jeneraly. "(Kraus et al 2018)
The Valin'ny Fanamarinana dia fiantrana fanabeazana mpisava lalana izay mahatonga ny siansa momba ny firaisana sy ny fitiavana ho azon'ny mpihaino marobe. Ny fifantohanay dia ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny tanora sy ny tanora tanora. Izahay dia nahazo fankatoavana avy amin'ny Royal College of General Practitioners any London mba hanao atrikasa 1 andro ho an'ny matihanina amin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana. Izany dia manohana ny tanjon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana izay ny fanambarana an-gazety etsy ambany dia manasongadina ny filàna fiofanana eo amin'ireo matihanina. Mampianatra any an-tsekoly koa izahay ary hanome drafitra lesona sy fanofanana ho an'ny mpampianatra amin'ny faran'ity taona ity. Manolotra serivisy fanoloran-kevitra ho an'ireo fikambanana maniry hamolavola programa fanentanana momba ny fahavetavetana.
Ho an'ny fanadihadiana na fampahalalana bebe kokoa ao anatin'izany ireo kopia feno voalaza ireo, azafady mifandray info@rewardfoundation.org.
Lahatsoratra feno amin'ny Famoahana ny ICD-11.
Ny WHO dia mamoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny aretina (ICD 11) 18 June 2018 News Release Geneva
Ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Fahasalamana (WHO) dia mamoaka ny fikambanana iraisam-pirenena iraisam-pirenena momba ny aretina (ICD-11).
Ny ICD no fototra hamantarana ny fironana sy statistikan'ny fahasalamana manerantany, ary misy kaody 55 000 tsy manam-paharoa ho an'ny ratra, aretina ary antony mahafaty. Manome fiteny iraisana izay ahafahan'ny matihanina amin'ny fahasalamana mizara fampahalalana momba ny fahasalamana manerantany.
"Ny ICD dia vokatra iray izay tena miavonavona ny WHO," hoy i Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tale Jeneralin'ny OMS. "Mahatonga antsika hahatakatra be dia be ny zavatra mahatonga ny olona ho marary sy ho faty ary hanao zavatra hisorohana ny fijaliana sy hamonjy aina."
ICD-11, izay efa am-polony taona mahery teo am-panamboarana, dia manome fanatsarana lehibe amin'ny kinova teo aloha. Sambany dia elektronika tanteraka izy io ary manana endrika mpampiasa-namana kokoa. Ary nisy ny fandraisana anjaran'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay mbola nanatevin-daharana ny fivoriana fiaraha-miasa ary nanolotra tolo-kevitra. Ny ekipan'ny ICD ao amin'ny foiben'ny WHO dia nahazo tolo-kevitra 10 000 ho an'ny fanitsiana.
Ny ICD-11 dia haseho amin'ny Antenimieran'ny Fahasalamana manerantany amin'ny volana 2019 ho an'ny fananganana ataon'ny mpikambana, ary hanan-kery amin'ny 1 Janoary 2022. Ity famoahana ity dia fanombohan-kevitra izay ahafahan'ny firenena mandrindra ny fomba fampiasana ilay dikan-teny vaovao, manomana fandikan-teny, ary manofana mpitsabo fahasalamana manerana ny firenena.
Ny ICD dia ampiasain'ireo mpiasan'ny fahasalamana ihany koa izay miankina amin'ny fametahana ny ICD; ireo mpandrindra ny programan'ny fahasalamana nasionaly; ; ary ireo hafa izay mandinika ny fandrosoana eo amin'ny fahasalamana maneran-tany ary mamaritra ny fametrahana ny loharanon-karen'ny fahasalamana
Ny ICD-11 vaovao dia mampiseho ny fandrosoana amin'ny fitsaboana sy ny fandrosoana amin'ny siansa momba ny siantifika. Ohatra, ireo fepetra mifandraika amin'ny fanoherana antibiotika dia mifanaraka kokoa amin'ny rafitra mpanara-maso ny fanaraha-maso Global Antimicrobial (GLASS). Ny ICD-11 koa dia afaka manatsara kokoa ny angon-drakitra mikasika ny fiarovana amin'ny fitsaboana, izay midika fa ny fisehoan-javatra tsy ilaina izay mety hitera-pahasalamana - toy ny asa tsy azo antoka ao amin'ny toeram-pitsaboana - dia azo fantarina sy hamehana.
Ny ICD vaovao dia ahitana toko vaovao ihany koa, iray amin'ny fanafody nentim-paharazana: na dia olona an-tapitrisany aza no mampiasa ny fitsaboana nentim-paharazana eran'izao tontolo izao, dia mbola tsy tafiditra ato amin'ity rafitra ity izy. Ny fizarana vaovao iray hafa momba ny fahasalamana ara-pananahana dia mampifandray ireo fepetra izay efa voasoritra tamin'ny fomba hafa (toy ny lisitry ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy) ao amin'ny toe-pahasalamana ara-tsaina. Ny trangam-pandrefesana dia nampidirina amin'ny fizarana momba ny korontana mampidi-doza.
"Ny fitsipika manan-danja amin'io fanitsiana io dia ny hanatsotra ny rafi-koditra sy ny fitaovana elektronika - izany dia hamela ireo mpitsabo manam-pahaizana hametraka mora foana ny toe-draharaha", hoy ny Dr Robert Jakob, ekipan'ny Leader, Classification Terminologies and Standards, OMS.
Dr Lubna Alansari, tale jeneraly misahana ny fahasalamana sy ny fahasalamana ao amin'ny WHO dia miteny hoe: "ICD dia vato ifaharan'ny fanazavana momba ny fahasalamana ary ny ICD-11 dia hanolotra fomba fijery vaovao momba ny aretina."